အွန်လိုင်းပစ္စည်းပစ္စယရောင်းဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello ကနေစီးပွားရေးအချက်အလက် | USAHello
သင်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံရောင်းထုတ်ကုန်အောင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်? ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့အွန်လိုင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်းအပိုဝင်ငွေရစေမယ့်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်. အွန်လိုင်းပစ္စည်းပစ္စယရောင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
အွန်လိုင်းပစ္စည်းများရောင်းငွေရှာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဖြစ်လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်, ရိုးရာအဝတ်အစားတွေ, သို့မဟုတ်အခြားသောအမှုအရာသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနိမ့်စျေးနှုန်းအဘို့ရှာတဲ့မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းရောင်းချ. တစ်ခုကအွန်လိုင်းစတိုးကိုမကြာခဏ "e-commerce" ဟုခေါ်သည်။ ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အချို့ဝင်ငွေအောင်ယူနိုင်ပါသည်အဆင့်အချို့ရှိပါသည်:
သငျသညျက e-Commerce အတွက်ထွက်ကိုစတငျဖို့လိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာတစ်မူထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းလူတွေအများကြီးအွန်လိုင်းရှိပါတယ်, သငျတို့သဟာမင်းအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ, ကြှနျတေျာ့အယူအဆကဘာလဲ? ကအခြားသူများထံမှထူးခြားသောဘယ်လို, သို့မဟုတ်ဘယ်လိုငါကထူးခြားတဲ့စေနိုင်သည်? သငျသညျအဝတ်ရောင်းပါလိမ့်မည်, ရှေငှေကြောကျမကျြရတနာ, သို့မဟုတ်အနုပညာလက်ရာအချို့အမျိုးအစား? သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ထူးခြားတဲ့နှင့်နှစ်လိုဖွယ်စေလိုလျှင်, လူအများစုကမဝယ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်.
အလားအလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးရှာဖွေရန်အခြားသောနည်းလမ်းဈေးထဲမှာလိုအပ်မှုကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကလူလိုအပျကွောငျးထုတ်ကုန်အောင်တတ်နိုင်လျှင်, သင်အွန်လိုင်းဈေးကဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်. တချို့ကထုတ်ကုန်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးများမှာ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းရောင်းလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တယ်. သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်ရေကြောင်းန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ရုံသင်ဝယ်လက်မှထုတ်ကုန်ရဖို့သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်နေတာသေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
2. သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန် Make
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးအယူအဆရှိသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုလုပ်ဖို့အချိန်င်. သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကြီးမြတ်အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်သေချာနှင့်ရောင်းချနေရကျိုးနပ်ပါစေ. သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရန်သင့်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းရမယ်’ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်. ဒါကြောင့်မျက်စိ-ဖမ်းသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသနျ့စသိမ်းဆည်းထားပါ.
သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်စေရန်ပေးသွင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တဦးတည်းပြုရမည်အမှုအရာတစ်ခုမှာဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျညာလင်းနို့ချွတ်စုံလင်သောထုတ်ကုန်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး, သင်မူကားအသေးစိတျအာရုံစိုကျထားကြောင့်တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်လျှင်, သငျသညျနောက်ဆုံးမှာလူများအတွက်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်အတူတက်အဆုံးသတ်မည်.
သင်တို့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဖို့သငျသညျချင်ပါတယ်တဲ့သူကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အလားအလာဖောက်သည်ဖြစ်နိုင်သူလူများ၏အုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်. သင်သည်သူတို့၏ဒေသစစ်တမ်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုနားလည်မှုရှိသင့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥာဏ်ရှိသည်. ဤနည်းကိုသင်ထိရောက်စွာသူတို့ကိုရန်သင့်ထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.
သင်ကိုယ်တိုင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေအသုံးပွုနိုငျအခြားသောနည်းလမ်းတစ်မူထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ် defining ဖွငျ့ဖွစျသညျ. သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်သင်မြင်ချင်ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည်, ထိုသို့ဈေး၌ရှိသမျှသည်အခြားသောပြိုင်ဘက်များထံမှသင်တို့ခွဲခြားပါလိမ့်မယ်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကြီးမြတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြည့်ကြပြီးအခြားသူများထံမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားပုံကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်သည်သူတို့၏လှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းသေချာအောင်.
ဂရိတ်အမှတ်တံဆိပ်ပဲသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသင်ပြောပြဘူး, သူတို့ကလုပျအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသင်ပြောပြ, သူတို့တန်ဖိုးများပေါ်တွင်အခြေခံအဓိပ္ပာယ်. ပန်းသီး, ဥပမာ, ကမ်ဘာပျေါမှာအကြီးမြတ်ဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကကွန်ပျူတာနှင့်အိုင်ဖုန်းဖန်တီး, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့သူတို့ကိုခွဲခြားသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုသူတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုယုံကြည်ပြောပါတယ်ကြောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားစဉ်းစား.
သငျသညျကို T-ရှပ်အင်္ကျီလုပ်ရောင်းချလိုလျှင်, သင်သာသင်သည် T-ရှပ်အင်္ကျီရောင်းချသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များမပြောသင့်ပါတယ်, သူတို့ကိုသင်ရောင်းအဘယ်ကြောင့်သင်တို့မူကားသူတို့ကိုရှင်းပြရမယ်. သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ထူးခြားသောကြောင်းအမည်ပေးသင့်. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျပုံမှန်မဟုတ်သောဖောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးလိုဂိုဖန်တီးသင့်တယ်. တခါတရံမှာ BRAND ပုံရိပ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရညျဆောကျမညျ.
5. သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုး Create
BigCommerce တစ်ဦးဦးဆောင် e-commerce ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. သူတို့က built-in စျေးကွက်နှင့်စကားပြောဆိုမှုနှင့်အတူတစ် Optimized e-commerce ဆော့ဖျဝဲများ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပြီးတဖန်သူတို့ကိုမရောင်း.
အမေဇုံ အွန်လိုင်းကသင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဖို့သငျသညျကို enable လိမ့်မည်ဟု Reseller ပေးတဲ့န်ဆောင်မှုရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချနှင့်၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသုံးပြီးသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကသင်တို့ကိုလည်း၏အားသာချက်ယူနိုငျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောရေကြောင်းအဖြစ်န်ဆောင်မှုများ.
Etsy သငျသညျလက်ဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းမဝယ်နိုင်မည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာထူးခြားမိမိတို့၏ထူးခြား handcrafted အပိုင်းပိုင်းရောင်းချင်သူကိုသင်တို့ကဲ့သို့ဖန်တီးမှုလူများအတွက်တီထွင်ရဲ့.
Shopify သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးကို set up နှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဖို့ခွင့်ပြု e-commerce ကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်စုစည်းနှင့်ရောင်းပေးနိုင်ပါတယ်, အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုလက်ခံ, ခြေရာခံများနှင့်အမိန့်တုံ့ပြန်.
ကို eBay ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ကြောင့်အဆောက်အဦစားသုံးသူ-to-စားသုံးသူသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-to-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းကြီးမားတဲ့ e-commerce ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ရောင်းသူတစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံရောင်းနိုင်ပါတယ်.
သင်လုပ်နိုင်သည် Supplyspy.com တစ်ဦးထံမှအမေဇုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကိုဖတ်ပါ. သငျသညျဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါဘူး. ယင်းအတွက်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ e-commerce ကိုမှဥပဒေရေးရာလမ်းညွှန်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်, သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သာအဖြစ်အောင်မြင်သောများမှာ. ထိုကွောငျ့, သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရဲ့, သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကိုသင်မယုံကြည်ကြပါလျှင်, သူတို့အခြားကုမ္ပဏီဘို့သင့်ကိုချန်ထားမည်. ယနေ့ဖောက်သည်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုအချိန်မီတုံ့ပြန်မှုချင်, သူတို့ကိုသင်ရောက်ရှိရန်အဘို့အဒါကြောင့်သင်အတော်ကြာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပူဇော်အရေးကြီးသောရဲ့: ဥပမာ, အီးမေးလ်က, ဖုန်းနံပါတ်, နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်.
အတော်များများဖောက်သည်လူမှုမီဒီယာအပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်း, ဒါကြောင့် communicate နှင့်ဤပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်. ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်, နှင့်သင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်ချက်တောင်း. သူတို့ကမဝယ်ပြီးနောက်သူတို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., သူတို့ကိုပြန်ဘို့ကလွယ်ကူစေ.
သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဖောက်သည်များမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အသက်သွေးကြောဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာအဖြစ်သက်သေစျေးကွက်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအမှုကိုနိုင်ပါတယ်, အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်မှာဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထား. သင့်ရဲ့ဖောက်သည်သင်မည်သူကိုသိရန်နှင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုကိုယ်စားပြုကြဘူးစို့.
ပြည်သူ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်အခြေခံထုတ်ကုန်ကိုဝယ် - သူတို့တစ်ခုခုခံစားမိချင်သောကွောငျ့သူတို့အွန်လိုင်းပစ္စည်းပစ္စယဝယ်ဖို့. သိပါနှင့်သင့်ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုခံစားမိစေမည်ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင်. သငျသညျအခြားလူများအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်းထုတ်ကုန်ရှိပါက, သင်ကရောင်းကိုကြောက်မဖြစ်သင့်.
အရောင်းရဆုံးသင့်ရဲ့အလားအလာဖောက်သည်ရန်သင့်ထုတ်ကုန်၏တန်ဖိုးဆက်သွယ်အကြောင်း. သင်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများရန်သင့်ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးအတွက်ကိုက်ညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအကောင်းတစ်ဦးအသိပညာရှိသည်နှင့်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်. သင်ဤလုပျနိုငျပါလျှင်, သငျသညျကိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ရောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အခြို့သောအခြမ်းဝင်ငွေဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မည်.